Nnwom 70 NA-TWI - Mmoa mpae - Gye me nkwa, O Onyankopɔn! - Bible Gateway
Nnwom 69Nnwom 71
Nnwom 70 Nkwa Asem (NA-TWI)
70 Gye me nkwa, O Onyankopɔn! Awurade, boa me mprempren! 2 Ma wonni wɔn a wɔpɛ sɛ wokum me no so na ma wɔn adwene nyɛ basabasa. Ma wɔn a esiane me haw nti wɔatɔ wɔn no, nsan wɔn akyi na wongu wɔn anim ase. 3 Ma wɔn a wodi me ho fɛw no mfa wɔn nkogu so mma wɔn koma ntu. 4 Ma wɔn a wɔba wo nkyɛn no ani nnye na wɔn ho nsɛpɛw wɔn. Ma wɔn a wɔda wo nkwagye no so ase no nka daa se, “Onyankopɔn yɛ ɔkɛse!” 5 Mayɛ mmerɛw na minni ɔboafo; bra me nkyɛn ntɛm, O Onyankopɔn. Wone m’agyenkwa, O Awurade; yɛ ntɛm bɛboa me.